Best Portable sutukezi Turntables 2017-mutengi kuti gwaro - China 10TURNTABLES
> Best Portable sutukezi Turntables 2017-mutengi kuti gwaro
Sutukezi Turntables Specification Kuenzanisa
Brand Name Turntable nokukurumidza mutauri Auxiliary Inzwa Zvinotaurwa Headphone Jack Buttons
Crosley CR8005A-DS ngarawa 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Crosley CR8005D-TW ngarawa Deluxe 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Electrohome Archer Vinyl Record Player Classic Turntable (EANOS300) 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Crosley CR6019A-BR Executive Turntable 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
1byone Belt-Drive 3-Speed ​​Portable redhiyo Turntable	 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Victrola Vintage 3-Speed ​​Makaralı sutukezi Turntable 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Jensen Portable redhiyo Turntable 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Ion Audio Vinyl Motion Deluxe | Portable 3-Speed ​​Belt-Drive sutukezi Turntable 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Musitrend Vinyl Record Player Classic Portable sutukezi 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
Tyler Makaralı bhegi Vinyl Record Player Classic Turntable 3 Speed Dynamic Full Range redhiyo vakurukuri √ √ Check Price
01 • Crosley CR8005A-DS ngarawa Turntable
Compact, nyore uye zvakachipa. Aya ndiwo mashoko anotsanangura turntables zvinoberekwa Crosley. All nzira kubva US, vangobvumira akararamazve kuti turntable chiitiko pamwe aakatipa zvinogadzirwa kuti vakabata pfungwa dzevakawanda turntable vachivakuza.
Nguva dzose aida turntable kuti haana kufanana mumwe? This Crosley ngarawa turntable kunouya oga Disney mifananidzo uye anokwanisa kutamba panguva aimhanya nhatu dzakasiyana izvo unokubvumira kuteerera mhando dzose zvinyorwa. Ko guru? turntable ichi kunouya ane Headphone Jack kuti private uchiteerera. Kutaura zvazviri, imwe auxillary chengarava riri kuiswa mugomba turntable, ichi kunoita kuteerera mumhanzi kunyange nani sezvo uchigona kushandisa nhare dzenyu kusarudza nziyo maererano zvaunofarira.
Zvinofanira yakagadzirirwa kuti sezvo inotakurika sezvinobvira. Aine Funky kusarudza mavara, zviri zvemapuranga mutsvuku ari kunze yellow mukati. Uyewo, iyo turntable kunouya simba rizere-siyana redhiyo vakurukuri izvo anokwanisa captivate pfungwa dzako uye mweya. turntable iyi akatemerwa mutengo pa $ 104,95.
Great mutambi nokuti beginners.
Perfect chipo nokuti shamwari kana mhuri.
The vhoriyamu goho riri zvishoma shoma.
02 • Crosley CR8005D-TW ngarawa Deluxe Turntable
Chimwe muenzaniso kubva Crosley, kambani iyi ekuteerera vaudzewo nguva uye nenguva zvakare kuti ivo vanokwanisa kuita penya turntables. Kana uri kutsvaka turntable kuti zvakawanda kurutivi chaiwo divi, ichi ndicho muenzaniso kwamuri. Coated muna shava, muenzaniso uyu akaita kupa kubvisa munhu mazambiringa Kutarira.
muenzaniso uyu Crosley kuti turntables kunouya vane tsono NP6. Kutongwa uye vaedzwa, tsono ichi hakuna kuipa kana uri kutsvaga imwe kupinda pamwero turntable. With turntable ichi uchikwanisa kubatanidza foni yako Via MAKARALI USB. Izvi zvinoita kuti uchazonakidzwa kuteerera kwako nziyo yaaida sezvo nyore sezvinobvira. Uyewo turntable anouya aine Headphone Jack iyo unokubvumira kuteerera favorite ako mimhanzi yaunonyanya voga. turntable ichi anokwanisa kuchinja RPM upi chinyorwa uye totaura ne simba redhiyo vakurukuri kuti delievers yakanakisisa okuteerera kuita kwenyu kunzwa.
Kunyange zvazvo bhuku goho kungava zvishoma shoma, zvose zvayakanakira kuti chigadzirwa ichi zvechokwadi kunoita nokuda kwayo. Inotarisira zvinoshamisa uye pasina mubvunzo zvinoshamisa mutambi. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pana $ 74,48 uye zvachose Zvaifadza kutengeserana kuti uwandu zvinhu ine.
Volume goho ingava shoma zvakare pasi.
Kupedzisa: Black textured PVC
KUVAKA ACHASHANDISWA: MDF Cabinet (svikiro arambe achirema fiberboard)
NHOROONDO mutambi: Hongu
NHOROONDO aimhanya: 33, 45, 78
NHOROONDO AUTO KUDZOKA ruoko kuchinja: NA
45 adhaputa aisanganisira: Hongu
AUTO KUDZOKA: Hongu
Radio - WANDICHAVA: No
USB uchiraira: No
USB MUZVINYORWA: No
SD slots: No
SD MUZVINYORWA: No
Headphone JACK: Hongu
ANOPA chiyamuro: Hongu
Mutauriri SIZE: 2 x 3 "5W 8Ohm
SIMBA EPS: External
SIMBA adhaputa chiyamuro: 120V - 240V (50/60 Hz)
SIMBA kunwa: 19 Watts
Frequency CHIYERO (AM): NA
Frequency CHIYERO (FM): NA
Miganhu: 18.5 "x13.38" x5.9 "
UNIT uremu: 13,82 LBS
CERTIFICATIONS: ICES, FCC vaipupurirwa, ETL / CETL
CHII aisanganisira: Archer sutukezi Turntable , 45 Record Adapter, AC Adapter, Instruction Manual, 1 Year Warranty, Hwangu Hwose Customer Support
Electrohome kwave vaitungamirira akaigadzira nevatengi yemagetsi zvigadzirwa kwemakore anopfuura 100.. Ravo vatengi wechipiri kuti hapana sezvo vane hwose vatengi rutsigiro. Izvi 3-mu-1 sutukezi turntable ane namaapuro pamwe muchizvikudza kwazvo uyewo kunokupa rugare rukuru rwepfungwa nokuda sei inotakurika ndiye.
Turntable ichi rwakafuridzirwa kubva muma1960. The Electrohome Archer Vinyl Record Player Classic Turntable anokwanisa kutamba raive nebutiro zvinyorwa uye yenyu mumhanzi kubva moblie chaizvo pachako mudziyo wako. Nerumwe, mumwe Headphone Jack inowaniswa private uchiteerera. Turntable iri dzichengeterwe ane huni zvose cabinet iyo rinobvumira yakavakwa nevakurukuri kusvika ayo zvizere zvinogona adzikinure yakanakisisa okuteerera kuita kuti kubata mwoyo wako. Kutaura zvazviri, unouya nesafiri miromo yesimbi zvedongo tsono zvinopa munhu inodziya zvoga vibe.
Coated nhema, zviri Magadzirirwo kwezvokufuka uye ane kuti Vintage mazambiringa kutarira. Zvakanyorwa zvapera nhema PVC uye ane mundiro epurasitiki. turntable ichi akasungwa neyokushandisa kwenguva refu kwazvo nguva. Kufanana turntables dzakawanda, vinyls vakawanda vanokwanisa kuridzwa zvakanaka. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pana $ 49,91 uye iguru kuba.
muvharo Large saka angavhara apo achitamba.
Vatauri kumativi pachinzvimbo mberi. Zvichiita ruzha nani multidirections.
Ane date chiteshi chengarava uye zvikorekedzo nechemberi.
Chimwe muenzaniso aakatipa kubva Crosley, iri sutukezi turntable kufanana nezvimwe. The Crosley CR6019A-BR Executive anokwanisa kutamba panguva dzakasiyana aimhanya matatu. Inoitwa ane auxillary waya unokubvumira kuridza nziyo chaunofarira kunyange zvenyu foni uye USB chengarava nokuda Windows wako kana Mac vakatsigira kombiyuta.
The sutukezi wakatesvererwa nendarira kuifukidza Hardware. Coated muna shava, chaizvoizvo rikakupindura kure chazvokwadi mazambiringa vibe. Kutaura zvazviri, zvinouya chete simba rizere-zvenguva redhiyo vakurukuri vane asina unhu. Matauriro ruoko kuti iiswe muimba turntable iri Click vachinzi kunyange zvazvo manually dzinodzorwa, zvinyorwa vachangoerekana kumisa kana apedza makwara ayo.
Akatemerwa mutengo panguva chete $ 81,52, muenzaniso uyu kunokosha dhora ose vakapedza. Ndicho wakakwana chipo shamwari dzako kana mhuri. Yakakodzera, nyore kushandisa uye zvikuru mushandisi noushamwari, muenzaniso uyu zvechokwadi mumwe wedu pamusoro sarudzo.
Akakwanisa kunyora nziyo MP3 faira Via USB chaitika.
Great mutambi chero beginners.
Volume goho riri zvishoma zvokutadza yakaderera.
05 • 1byone Belt-Drive 3-Speed Portableredhiyo Turntable
Kwete kungova zvinoshamisa dzakanaka design, turntable ichi ane zvose kuti tigutse zvido zvaunoda kana uri kutsvaga imwe kupinda pamwero turntable. Achitsvaka kutengeka uye inotakurika turntable? Uchipindura ndiye 1byone Belt-Drive 3-Speed Portable redhiyo Turntable .
It anokwanisa kuridza zvinyorwa zvakasiyana aimhanya matatu. Uyewo, Rakagadzirirwa sezvo bhegi vachinzi turntable akaputirwa pamwe PU reganda nenhumbi yamatanda cabinet. Elegant asi aiona, muenzaniso uyu yairwara mumwe kuti Anobata ziso. Small andcompact, unokwanisa achengetere ichi kwese uye chero nguva. Yose zvayo, zvichiriita dzakanaka asi zvinoshamisa design kuti abate mufunge.
turntable ichi chine simba mwero matauriro ruoko ane nyoro damping mashandiro. turntable Izvi chinosanganisira mberi kusangana vakurukuri ive nani mutsindo unhu. Kutaura zvazviri, anopiwa ane Headphone Jack unokubvumira kuteerera voga uyewo. Althought payo skips zvishoma kana toreva vinyls itsva, uwandu zvayakanakira muenzaniso uyu anoita nokuda kwayo. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pa $ 59,99.
Anotarira zvinoshamisa uye zviri nyore kumisa uye taitamba.
Small uye chiine.
06 •Victrola Vintage 3-Speed Makaralı sutukezi Turntable
Inopenya, unoshamisa uye eyecatching. The Victrola Vintage 3-Speed Makaralı sutukezi Turntable ane zvakasiyana-siyana zvinoitwa kana totaura mumhanzi. Turntable Izvi rine yakavakwa vakurukuri kuti rinogona kushandiswa kana nokuda vinyls, auxillary netambo uye kuburikidza MAKARALI USB basa.
All kuti tigutse zvido nyore wako. The MAKARALI USB basa iguru kana hamuna vinyls kana auxillary netambo varipo. Sezvo unokwanisa kumboremekedza handedly kuridza chero mumhanzi uchida kubva kwamuri mudziyo. Anouya aine Headphone Jack kuti private uchiteerera zvakanaka.
Models kubva Victrola zvakagadzirirwa kutarira sezvo Vintage sezvinobvira. Ndicho dzakanaka, zvinoshamisa uye kunoita kubvisa nostalgic vibe ane American diner. Tichitarisa zvose zvinhu uye mutengo muenzaniso uyu, zvinofanira mumwe wako pamusoro sarudzo kana uri kutsvaka turntable. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pa $ 57,15.
Perfect stowaway shamwari uye inotakurika chaizvo.
Great rekodhi mutambi uye mutauri nokuda mutengo ichi.
07 • Jensen Portable redhiyo Turntable
Simplicity panguva yayo wakanakisisa, kuti Jensen Portable redhiyo Turntable chinhu bhandi nemhepo turntable kuti anogona kutamba panguva aimhanya nhatu dzakasiyana runovabvumira vinyls vakawanda kuridzwa zvakanaka. Zvakagadzirirwa nhema, zvechokwadi ine kuti kare Retro sutukezi vibe uye chaizvo nemasango.
Chii chinoita muenzaniso uyu anomira kunze ndechokuti It ane mashandiro kuti chinokonzera matauriro ruoko kudzokera kwairi chepakutanga nzvimbo mushure raive nebutiro apedza vachiridza makwara ayo. Amazing handizvo? Kunze kwaizvozvo, turntable ichi kunouya ane zvose itsva Audacity Software yakakodzera kurekodha uye Editing Audio yenyu. Saka, iwe haana kutenga chero mamwe softwares kuti aongorore Audio wako.
Kurova shiri mbiri nedombo rimwe. Zvinoitawo anouya aine auxillary chiteshi inogona chokuita ne foni yako uye ane rca chengarava mimwe vakurukuri. Kwete kunetseka ave 120V AC adapteri kunobatanidzwa kuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri inzwi perfomance. Additionaly, zviri muvharo guru kunogona kuvharwa apo achitamba kudzivisa guruva kuuya. Zvino pasi chakanakisisa chikamu, mutengo wayo. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pa $ 94,95.
Vatauri panhivi kupa nani multi-achitaura inzwi.
08 • Ion Audio Vinyl Motion Deluxe | Portable 3-Speed ​​Belt-Drive sutukezi Turntable
Asi mumwe muenzaniso nokuda naIon, izvozvo inovakwa mukirasi uye unhu. The Ion Audio Vinyl Motion Deluxe munhu inotakurika 3-Speed ​​Belt-Drive sutukezi Turntable anenge yakavakwa vakurukuri kuti zvakanakisisa inzwi yepamusoro. Izvi zvinoreva haufaniri kuwana chero mamwe vakurukuri kumisazve turntable yenyu. Ko kuti zvakazonaka?
Mumwe yakanakisisa zvikamu turntable uyu kuti bhatiri riri rechargable kuitira maawa tifare. Une imwe auxillary chiteshi uye Headphone Jack kutamba mumhanzi kubva moblie chaizvo pachako mudziyo wako uye private listeningrespectively.
turntable Uyu muenzaniso mukuru wose kutsvaka kuti ive kundopinda pamwero mutambi. Zviri zvikuru nyore uye hunogona kungoparara kuchengetwa. Ndiro kukosha pamusoro inotakurika sutukezi mutambi handizvo? muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pana $ 37,67 uye unofanira kuwana maoko enyu pamusoro chete nhasi.
Great zvinhu kupinda pamwero mutambi.
Nyore uye zvakanaka nokuwanda muzviruva.
Small inotakurika turntable ane womukati bhatiri mundiro uye yakavakwa nevakurukuri.
09 • Musitrend VinylRecord Player Classic Portable sutukezi
Imwe pfungwa huru dzehurukuro yacho Musitrend Vinyl Record Player Classic Portable sutukezi ndechokuti lightweight, rairema LBS 5.8 chete. Rakagadzirirwa yakaita sutukezi anouya ane nyore mubato yakakodzera rokutakura. Zvinoshamisa sei Musitrend akakwanisa kuita muenzaniso uyu saka chiedza.
turntable Izvi kusimba-chinja uye kuti mushandisi noushamwari nokuti anouya aine auxillary chengarava enyu Mobile mano, mumwe Headphone Jack kuti private yokuteerera, uye ane rca goho mimwe vakurukuri. Zvose zvinhu zvaunofanira zvose vakatutirana muimba muenzaniso uyu. Kana uchiri kufunga, tarisa mberi.
The Audio unhu zvechokwadi kunoshamisa nokuti kuti inovakwa kubva huni uye wakatesvererwa dehwe kuti zvimwe yakashongedzwa Kutarira. With zvishoma Kumubata tsvuku mukati, zvirokwazvo anotarisa asina. Kwete kuti kukanganwa kuti anogona kutamba pa 3 aimhanya yakasiyana kuti mukuru zvakasiyana siyana vinyls. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo musoro pa $ 59,99.
Anouya USB saka unogona kusika MP3 mafaira pakombiyuta yako.
Speed ​​kuti zvishoma pashure refu maawa nokutamba.
10 • Tyler Makaralı bhegi Vinyl Record Player Classic Turntable
Kana uchida turntable kuti anotarisa kukuru uye sezvine kukuru, ichi ndicho muenzaniso kwamuri. The Tyler Makaralı bhegi Vinyl Record Player Classic Turntable anokwanisa kutamba raive nebutiro zvinyorwa uye Mobile namano kuburikidza USB pachiteshi iiswe. Kutaura zvazviri izvozvo ane auxillary chiyamuro unobvumira rimwe chingaitwa achitamba yako vogadzira namano.
turntable Izvi ine imwe Headphone Jack kuti unobvumira private uchiteerera. Nyaya iyi kunganyatsoratidza kubatsirwa avo kuti vanosarudza vamwe nguva yakanyarara ndiri ndoga uye zoning kubva munyika. Rinewo ane rca goho chero vakurukuri additonal zvamunoda. Inogona kuridza panguva dzakasiyana aimhanya matatu uyewo runovabvumira vinyls vakawanda kuridzwa.
Akagadzirwa nhema kunze yellow mukati, zvine kupa kubva kwezvokufuka chaizvo vibe kwairi. Uyezve, Runako kuita panyaya zvakadaro. muenzaniso uyu anoita kwete anotarisa zvakanaka asi zvinoita. Kunyange zvazvo zvingaita zvishoma wobbles pachikuva, izvozvo inovakwa pamwe pakuvara vakurukuri uye dzichengeterwe nenhumbi yamatanda cabinet kuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri zvakarekodhwa perfomance. Saka womuenzaniso iyi zvinenge wechipiri hapana. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pa $ 89,95.
chipo Great nokuti shamwari uye mhuri.
Little wobbles pachikuva.